Itiyoo-Ertiraa: Pireezidant Isaayyaas Afawarqiin eenyu? - BBC News Afaan Oromoo
Pireezidantii Ertiraa Isaayyaas Afawarqii
Gaaffii fi deebii gaazexeessitoota waliin taasisaniin waa'ee jireenya dhuunfaa isaanii xis ximbaa hin jedhan, Pireezidant Isaayyaas Afawarqiin.
Kanumaafuu odeeffannoon kallattiidhaan jireenya isaaniin wal-qabatu bicuu yoo taheyyuu maddeen mootummaa biyyattii wajjin hidhata qabaniifi gabaasawwan yeroo garaagaraatti BBC irratti bahan wabeeffachuun kan armaan gadii barreessine.
Bara 1946, Asmaraa warra hojjettoota irraa dhalatan. Amma ganna 72 guutaniiru.
Haala Barumsaafi maatii
Barumsa isaanii sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Piriins Mokonnon bara 1965tti xumuran. Yunivarsiitii Finfinnee galuunis damee barumsa injinariingii qo'achuu jalqaban. Haa ta'uutii bara 1966 barumsa isaanii addaan kutuun Sudaan bakka Kassaalaa jedhamutti Addaa Bilisummaa Ertiraatti makaman.
Isaayyaas haadha warraa isaanii qabsooftuu duraanii Adda Bilisa Baasaa Uummata Ertiraa Saabaa Haayilee wajjin ijoollee dhiiraa lamaafi dubara tokko horatanii jiru. Amantaa Ortodoksiis hordofu.
Isaayyaas Afawarqiin Adda Bilisummaa Ertiraa gama garaagaraan yoo qeeqaa turaniyyuu boodarra garuu dhaabichaaf cichuun qabsaa'aa akka turan marsariitiin Madote jedhamuufi mootummaa biyyatti waliin hidhata qabu irratti katabamee jira.
Bara 1967 tti leenjii loltummaaf hiriyyoota isaanii waliin gara Chaayinaa ergaman. Achittis waggaa lamaaf ilaalcha siyaasaafi riphanii loluu qo'atan.
Bara 1970 tti wal dhabdee Adda Bilisumma Ertiraa gidduutti uumamaeen dhaabichi garee sadiitti qoodame. Gareen Isaayyaasiin hogganamuus namoota hanga 10 gahan qabatee gara baha Ertiraatti baqate.
Isaayyaas bara 1971 tti maanifeestoo (barruu qajeelfamaa) 'Qabsoo keenyaafi kaayyoosaa' jedhu taayip raayitarii fayyadamuun barreessan. Qajeelfamni kunis, wal-dhabdee sabummaa fi amantii qabsoo isaanii keessa jiru furuu irratti kan xiyyeefate ture.
Waggaa sadii booda gareewwan kun walitti dhufuun dhaaba Adda Bilisummaa Ummata Ertiraa jedhu hundeessan.
Madda suuraa, PETER BUSOMOKE
Hoggantoota addunyaa keessaa hojjaa dheeraa akka qaban ni himamaaf.
Bara 1977 barreessaa gargaaraa Adda Bilisummaa Ummata Ertiraa tahuun muudaman.
Ergasii waggaa kudhan booda barreessaa olaaanaa Adda Bilisummaa Ummata Ertiraa tahan. Mootummaa Yeroo Ertiraa keessattis aangoo dhuma kanaan tajaajilaniiru.
Ertiraan bara 1993 tti walabummaa yeroo labsituu, gumiin Eritiraatii pireezidantii tahuun filataman.
Pireezidant Isaayyaas yeroo jalqaba gara aangoo dhufan taajjabdoota idila addunyaatiin Ertiraaf waan gaarii fidu jedhamanii abdatamanii turan. Pirezidantiin Ameerikaa yeroosii Biil Kiliintanillee 'hogganaa haaromsaa' isaan jedhanii turan.
Heerri biyyattii bara 1997 tti kongireesii biyyaalessaatiin ragga'e.
Bara 1998-2000 biyyi hoggansa isaaniin bultu Itoophiyaa wajjin daangaa irratti wal-waraante. Lafti sababa lolaa taatee namoonni 70,000 tahan irratti dhuman Baadimmeen, albuudas tahe dhakaa gatii jabeessa qabdu. Wal-waraansichis lola namoota moluu faaqqee irratti wal-lolan jedhame.
Kana booda pireezidantiin kun sochii siyaasaa biyyattii keessatti adeemsifamu mara dhorkan. Biyyattiin bulchiinsa nama tokkoorra buute.
Biyyoota Gamtoomani dabalatee dhaabooti idila-addunyaa biyyattii mirgoota namoomaafi walabummaa sab-himaalee sarbuuf ukkaamsuun yoo komatan pireezidant Isaayyaas garuu gaaffiifi deebii yeroo garaagaraa gaazexeessitoota waliin taasisanii rakkooleen jedhaman akka hin jirre haalaniiru.
Yeroo dhuma kan haaromfame: 26 Amajjii 2022